မင်းရဲ့ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းဖြေရှင်းချက်အတွက် Oil Skimmer ထောက်ပံ့မှု - SEHO
Oil Skimmer ထောက်ပံ့မှု။ ရေကန်တိုင်းတွင် အရည်နှင့် ချောဆီ၏ ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကို ရောနှောထားပြီး စက်ကို ထိရောက်မှုအရှိဆုံး အခြေအနေတွင် ရှိနေစေရန်အပြင် အရည်၏ ထိရောက်မှုနှင့် အလုပ်အပိုင်းအစများ၏ အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းမှာ အရည်ကို ခွဲထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ နှင့်ချောဆီ။ လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း အေးမြသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရောက်ရှိစေရန်နှင့် အရည်များ ဆိုးရွားလာပြီး အနံ့ဆိုးများထွက်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။ SEHO သည် 1995 ခုနှစ်တွင် Used Machinery လုပ်ငန်းဌာနကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး CNC Lathe၊ Vertical/Horizontal machining center၊ Double column machining center၊ 5-FACE machining center၊ 5-AXES machining center၊ grinding machines... and machine tool အပါအဝင် သုံးစွဲသူများအတွက် အလုံးစုံစက်များကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ။
Home အမျိုးအစား ဝန်ဆောင်မှု ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ရေစစ်စနစ်
33 နှစ်ကျော် Oil Skimmer၊ အသစ်နှင့် အသုံးပြုထားသော ပစ္စည်း - SEHO
SEHO INDUSTRY CO., LTD.1995 ခုနှစ်မှစ၍၊ ထိုင်ဝမ်အခြေစိုက် Oil Skimmer၊ အသစ်အသုံးပြုထားသော CNC စက်များ၊ ကြိတ်စက်များနှင့် ကြိတ်စက်ခေါင်းများနှင့် ထိုင်ဝမ်အခြေစိုက် စက်အပိုပစ္စည်းများကို ထောက်ပံ့ပေးနေပါသည်။
1. ဝတ်ဆင်နိုင်သော wiper ဖြင့် စွန့်ပစ်ဆီများကို ဖယ်ရှားပါ၊ ၎င်းသည် စားသုံးနိုင်သော ပစ္စည်းများ လုံးဝနီးပါးဖြစ်သည်။ ဖြတ်ထားသော အရည်၏ သက်တမ်းကို ရှည်စေရန် ဇဝေဇဝါရှိသော ဆီများကို အမြန်ဖယ်ရှားပါ။
2. ဆွဲငင်အားဖြင့် ကွင်းဆက်နှင့် idler ရော့ချိတ်ထားသော ဒီဇိုင်းကို ပေါင်းစပ်ပါ၊ idler ပြုတ်ကျပြီး ချစ်ပ်ပြားကပ်နေခြင်းကို ကာကွယ်ရန် idler ကို အောက်ခြေတွင် ရွေ့လျားနိုင်သော ရွေ့လျားနိုင်သော axes နှစ်ခုကို ထားရှိပါ။
အရွယ်အစား- 245 x 240 x 182 မီလီမီတာ (လက်ကိုင်ဖယ်ထုတ်ပါ) အောက်ခံ : 170x205 မီလီမီတာ
အရည်- အဖုံးအောက်တွင် 140mm ± 5mm
ကွင်းဆက်အကျယ်: 70mm ± 2mm
ပါဝါ : 15W
ဗို့အား- AC 110V/AC 220V
ပစ္စည်းအလေးချိန်:7ကီလိုဂရမ်
ကြိတ်စက် ... စသည်တို့။
ဝတ်ဆင်နိုင်သော wiper နှင့် ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပုဆိန်နှစ်လုံး
ပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး လိုအပ်ချက် နှင့် အလုပ် အပိုင်းများ အရည်အသွေး ပေါ်မူတည်၍ ခေတ်မီ စက်ရုံ တွင် လိုအပ်သော ပစ္စည်း များ ဖြစ်လာ သည်။ ၎င်းသည် စွန့်ပစ်ဆီ၊ emulsion၊ အညစ်အကြေးများနှင့် ရေများကို ရေတိုင်ကီ၏ မျက်နှာပြင်မှ ထိရောက်စွာ ခွဲခြားနိုင်သည်။ ပုံမှန်ဆေးကြောခြင်းနှင့် အရည်စစ်ထုတ်ခြင်းတို့သည် တည်ငြိမ်သောအရည်အသွေးကိုလည်း တာရှည်ခံစေမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ၎င်းသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို တိုးမြင့်စေပြီး ပြန်လည်အသုံးပြုရန်အတွက် တိကျမှုကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ထို့အပြင် အရည်များ ယိုယွင်းမှုကို လျော့ပါးစေပြီး အနံ့ဆိုးများ ဖြစ်လာစေနိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ပြန်လည်အသုံးပြုသည့်အရည်သည် မော်တာနှင့် လုပ်ငန်းခွင်များ၏ မျက်နှာပြင်ကို ယိုယွင်းပျက်စီးစေပြီး သံချေးတက်သွားခြင်းကို ရှောင်ရှားရန်။ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ လည်ပတ်ပြီးနောက် ရေကန်သည် ချပ်ပြားများကို သိုလှောင်ထားမည်ဖြစ်သည်။ ချစ်ပ်ပြားအလွန်အကျွံသောက်ခြင်းသည် ရေမလုံလောက်ခြင်းနှင့် တိုင်ကီစွမ်းရည်ကို လျော့ကျစေသည်။ filtration separation system က ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
စက်လည်ပတ်နေချိန်တွင် အရည်သည် ရေမှုန်ရေမွှားဖြစ်သွားလိမ့်မည်။ မြူခိုးများသည် အော်ပရေတာ၏ အမြင်အာရုံကို ထိခိုက်စေပြီး လုပ်ငန်းစဉ်ကို အလွယ်တကူ မမြင်နိုင်ပေ။ Mist collector သည် လည်ပတ်မှုဧရိယာမှ အမှုန်အမွှားများကို ထုတ်ယူပြီးနောက် filter လုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် ရေကန်ထဲသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ ၎င်းသည် အော်ပရေတာအား မြူခိုးများဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို လျှော့ချမည်ဖြစ်သည်။
စက်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း အရည်နှင့် သေးငယ်သော ချစ်ပ်များကို ရောနှောသွားမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အရည်များ ညစ်ညမ်းပြီး နံစော်စေသည်၊ ဤကိရိယာသည် အရည်ထဲမှ အတုံးသေးသေးများကို စစ်ထုတ်နိုင်ပြီး သန့်ရှင်းကောင်းမွန်လာစေရန် ပြုလုပ်နိုင်သည်။